अवरूद्ध युट्यूब भिडियोहरू हेर्नुहोस् - कार्य विधि (२०२०) - कसरी
ब्लक युट्यूब भिडियोहरू कसरी हेर्ने?
यूट्यूब सबैभन्दा ठूलो भिडियो साझेदारी प्लेटफर्म मध्ये एक हो। सेवाको बारेमा सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो कि यो प्रयोग गर्न को लागी १००% नि: शुल्क हो। जो कोहीले आफ्नो सेवा उपयोग गर्न सक्दछ। हामी सुझाव दिन्छौं कि सबैजनाले कम्तिमा एक पटक यो प्रयास गर्नुपर्दछ त्यहाँ धेरै भिडियोहरू छन् जुन वेबसाइटमा ब्लक गर्न सकिन्छ। त्यहाँ साइटमा विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धहरू भइरहेका छन्। सबैजना दिनहुँ अन्य मनोरन्जनात्मक भिडियोहरू हेर्न चाहन्छन्।
हामी यस मार्गनिर्देशन मार्फत तपाईं कसरी अवरुद्ध यूट्यूब भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर एक नजर लिनेछौं। हाम्रो लक्ष्य धेरै काम गर्ने विधिहरूको बारेमा छलफल गर्नु हो। यसले विश्वभरिका सबैका लागि काम गर्दछ।
रोकिएका यूट्यूब भिडियोहरू हेर्ने उत्तम तरिकाहरू:
यस सेक्सनमा, हामी युट्यूबलाई कहिँ पनि काम गर्नको लागि उत्तम विधिहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं। तपाईं कुनै चिन्ता बिना प्रीमियम सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। यी शीर्ष छनौटहरूको प्रयास गरीएको छ।
हाम्रो विज्ञहरु अनुसन्धान मा काम को धेरै समय खर्च गरेको छ। समाधानहरू पूर्ण प्रमाण हुन्। तपाईको दैनिक तालिकामा यि बाहिर काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। निर्देशनहरू तुरून्तै हेर्नको लागि सुरू गर्नुहोस्।
यो सब भन्दा सीधा विधिहरू मध्ये एक हो। धेरै क्षेत्र लकहरू यो सरल चालका कारण भइरहेको छ।तपाईं आफ्नो लक परिवर्तन गर्न यस स्रोतको उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अवरुद्ध युट्यूब भिडियो केहि समय मा काम सुरु हुनेछ। हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईले यो सरल ट्रिक चलाउन शुरू गर्नुहोस्।
पहिलो चरण भनेको तपाईंको मनपर्नेको कुनै पनि भिडियो फेला पार्नु हो। प्रयोगकर्ताहरूले यूट्यूब वेबसाइटको भ्रमण गर्न सक्दछन् र उनीहरूको मनपर्ने भिडियो खोजी गर्न सक्छन्। तपाईंले यस भिडियोमा लिंक प्रतिलिपि गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो चरण भनेको लिंकमा एक सानो सम्पादन गर्नु हो। मूल लि्क यसप्रकारले केही देखिनेछ - https://www.youtube.com/watch?v=6udJqygTuTo । तपाईंले 'वाच? V =' लाई '/ v /' बदल्नु पर्छ। यो त्यसपछि हुन्छ - https://www.youtube.com/v/6udJqygTuTo ।
यो अधिक भिडियो संग काम गर्न सक्दछ। कहिलेकाँही तपाईं त्रुटि सन्देश पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
Hooktube एक लोकप्रिय वेबसाइट हो कि दर्शकहरु लाई youtube को एक लाइट संस्करण प्रदान गर्दछ। तपाईं यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट कुनै पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले भिडियो अनब्लक गर्ने प्रक्रिया एकदम सरल बनाउँछ।
साइट तपाईंको भिडियो लिंक दर्पण। यो प्रयोग गर्न धेरै सरल छ र लिंक सम्पादन विधि अन्तर्गत पर्दछ। तपाईं केहि सानो परिवर्तनको साथ समान चरणहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ। प्रयोगकर्ताहरूले यूट्यूबको सट्टा हुकट्यूब लिंक थप्नु पर्छ।
उदाहरण को लागी - https://www.youtube.com/watch?v=H9p4-pzoz-Y लाई https://hooktube.com/watch?v=H9p4-pzoz-Y ।
यो वाद्ययन्त्र हो र धेरै समय लिदैन। यस महान लिंकको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताहरूले यूट्यूब भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्दछन्।हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईंले आज यसलाई प्रयोग गरी हेर्नुहोस्। यो तुरून्त तपाईंको सबै क्षेत्र लक भिडियोहरू अनब्लक गर्दछ।प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस एकदम सरल छ। यो सेवा प्रयोग गर्दा तपाईलाई कुनै समस्या हुने छैन।
यूट्यूब वैकल्पिक अनुप्रयोगहरू:
यूट्यूब प्लेटफर्म जनता बीच अत्यधिक लोकप्रिय छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो भिडियो मनोरन्जन आवश्यकताहरूको लागि प्लेटफर्मको प्रयोग गरिरहेका छन्। धेरै अनुप्रयोग विकासकर्ताहरू यसको लोकप्रियतामा क्यापिटलाइज गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। तपाईं यूट्यूब विकल्पहरू धेरै छन् देख्न सक्नुहुन्छ। यी अनुप्रयोगहरूले समान यूट्यूब भिडियोहरू बिभिन्न सेटि .मा चलाउँदछन्। यी अवरुद्ध youtube भिडियो समस्या समाधान गर्न गहन सहयोगी हुन सक्छ। इन्टरनेट मा धेरै प्रयोगकर्ताहरु आफ्नो स्मार्टफोन मा यो प्रयोग गर्दै छन्। केवल दोष यही हो कि यो विधि एन्ड्रोइड र आईओएस प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ।
१. नयाँ पाइप
नयाँ पाइप पछिल्लो अनुप्रयोग हो जुन एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूलाई यूट्यूब भिडियो सजिलैसँग स्ट्रिम गर्न मद्दत गर्दछ। यो अवरुद्ध भिडियो को संख्या को कम गर्न को लागी तपाईंले सामना गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेवा को उपयोग को समग्र प्रक्रिया काफी प्रभावशाली छ। यो प्रक्रियाबाट सुरू हुन्छ तपाईले उच्च गुणवत्ताको सामग्री छिट्टै पाउनुहुनेछ भनेर सुनिश्चित गर्न। वेबसाइट तपाइँलाई आवश्यक जानकारीको साथ मद्दत गर्न छ। साधारण डाउनलोड गर्न धेरै समय लाग्दैन।
तपाईं आफ्नो उपकरणमा यूट्यूब अनुप्रयोग बदल्न सक्नुहुन्छ। यस सेवा वा क्षेत्र लकहरूमा कुनै कष्टकर विज्ञापनहरू छैनन्। विश्व भर बाट भिडियो सजीलो पहुँच योग्य छ। द्रुत परिणामहरू हेर्न आज यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
२. VPN विधि
VPN सेवाहरूले तपाईंलाई तपाईंको उपकरणको स्थान परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ। यो तपाइँको सेवा प्रदायक लाई धोखा गर्न को लागी एक सजिलो तरीका हो। यसले तत्काल कुनै पनि भिडियो अनब्लक गर्न सक्दछ। प्रक्रिया क्षेत्र लक मुद्दाहरूको सामना गरिरहेका प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपयुक्त छ। धेरै प्रतिबन्धित वा अवरुद्ध YouTube भिडियोहरू यस विधिलाई सजिलो फिक्सको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछन्।
इन्टरनेटमा VPN सेवाहरू प्रयोग गर्न फ्रि धेरै छन्। हामी मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको लागि टर्बो VPN सिफारिस गर्दछौं। पीसी प्रयोगकर्ताहरूले सहज पहुँचको लागि ब्राउजर विस्तारहरूको प्रयोग गर्न सक्दछन्। कम्प्युटरहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय VPN होला VPN हो। द्रुत सेवाका कारण तिनीहरू अत्यधिक लोकप्रिय छन्। तपाइँ तपाइँको स्थान को दुनिया मा कहीं पनि बदल्न सक्नुहुन्छ।
धेरै प्रयोगकर्ताहरू प्रीमियम अनुभव प्राप्त गर्न चाहन्छन्। ती प्रयोगकर्ताहरूको लागि हामी सिफारिस गर्दछौं NordVPN सेवा। यो एक भुक्तान गरिएको सेवा हो जुन सुरक्षा र स्थान सुविधाहरूको टनको साथ आउँदछ। यस सफ्टवेयरको मुख्य सुविधाहरू मध्ये एक तपाईंको स्थानको स्पूफ गर्नु हो। यसलाई आज प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् र केहि राम्रा फाइदाहरू पाउनुहोस्।
VPN काला शुक्रवार - आश्चर्यजनक सौदा
Pro. प्रोक्सी सर्भर विधि
प्रोक्सी सर्भरहरू धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि अन्तिम उपाय हो। यो समस्याग्रस्त विधि हो जुन हामी सिफारिस गर्दैनौं। चरम परिदृश्यहरूमा, तपाईं यो सेवा उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोक्सी सर्भरहरूले तपाईंलाई इन्टरनेटमा तपाईंको स्थान लुकाउन मद्दत गर्दछ। यसले तपाइँको अनलाइन उपस्थिति पूर्ण रूपमा अज्ञात राख्नेछ।
पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहन यो उत्तम तरिका हो इन्टरनेट प्रयोग गर्दा। यी सेवाहरू प्राय: भुक्तान गरिन्छ तर सहजै काम गर्दछ। अनलाइन सबैभन्दा लोकप्रिय प्रोक्सी सेवाहरू मध्ये एक प्रोक्सफ्री हो। तिनीहरूसँग नि: शुल्क युट्यूब प्रोक्सी छ। यसले तपाइँको स्थान कहिँ पनि परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ।प्लेटफर्मले तपाईंलाई ब्लक गरिएको यूट्यूब भिडियोहरू नि: शुल्क हेर्न अनुमति दिन्छ।
Download. यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्
समस्याको अर्को सजिलो समाधान भिडियोहरू डाउनलोड गर्नु हो। यो काम गर्दछ तपाईंको भिडियो क्षेत्र मा ब्लक गरिएको छ भने पनि। यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्नका लागि धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन्। धेरै सफ्टवेयर उपकरणहरूले सुनिश्चित गर्दछ कि प्रयोगकर्ताहरूले सजिलै सामग्री स्ट्रिम गर्न सक्दछन्।
यो तपाईंको कम्प्युटरमा सामग्री बचत गर्नका लागि उत्तम छ। हामी हाम्रा पाठकहरूलाई YTD डाउनलोडर सेवा प्रयास गर्न सल्लाह दिन्छौं। यो सब भन्दा पुरानो र सबै भन्दा महत्वपूर्ण सेवा हो। सफ्टवेयर एक लामो समय को लागी गरीएको छ। तपाईं उपकरणमा कुनै लिंक लिंक छिटो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
ब्लक गरिएको यूट्यूब भिडियोहरू हेर्नु सजिलो प्रक्रिया हो। जो कोहीले यस लेखमा छलफल गरिएका विधिहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। हामी आशा गर्दछौं कि संकलन विधिहरू तपाईका लागि उपयोगी छन्। आजै यो प्रयास गर्नुहोस् र यदि उनीहरूले तपाईंको समस्या समाधान गरे भने हामीलाई भन्नुहोस्।
Bluestacks vs Nox App Player - अन्तिम तुलना (२०२०)
जहाँ निःशुल्क फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ
xbox प्रत्यक्ष सुन कोड जनरेटर
कसरी एक खाता बिना tumblr सुरक्षित मोड असक्षम गर्ने
जहाँ नि: शुल्क टिभी कार्यक्रमहरू डाउनलोड गर्ने
जहाँ निःशुल्क फिल्महरू हेर्न
अमेजन प्रधान छात्र मासिक शुल्क